Misintona Duit Dua Apk ho an'ny Android [App Loan 2022]
Salama daholo, mila findramam-bola avy hatrany ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahagaga ho anareo rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe Duit Dua. Izy io dia fampiharana Android, izay manome vola kely ho fampindramam-bola amin'ny zanabola ambany.
Araka ny fantatrao, noho ny toe-javatra mahatsiravina dia olona an-tapitrisany maro no very asa sy vola miditra. Noho izany, fotoana sarotra be ho an'ny olona manerana an'izao tontolo izao ny mamerina ny zava-drehetra indray mandeha. Misy olona an-taonina izay tsy afaka misakafo amin'ity toe-javatra ity.
Noho izany, misy tetika mpahazo tombontsoa samihafa, izay novolavolaina hanohanana ireo olona rehetra ireo. Afaka mahita fampiharana hafa ianao, izay manolotra karazana tetika hafa, fa eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra, izay manome vola amin'ny tahan'ny zanabola ambany indrindra.
Manolotra ny rafitra fampindramambola tsara indrindra ho an'ny olona hanamora ny fiainany izany. Misy serivisy samihafa amin'ity fampiharana ity, izay hizara aminareo rehetra ary hizara ny fizotran'ny fangatahana indram-bola koa izahay. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy hahafantarana bebe kokoa momba izany.
Topimaso momba ny Buit Dua
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolaina ho an'ny olom-pirenena Indoneziana. Io no fampiharana tsara indrindra, izay manolotra vola ho an'ny olona ho fampindramam-bola amin'ny zanabola ambany indrindra. Tsy manome vola be izy io fa 90 tapitrisa IDR no ambony indrindra azon'ny olona mangataka.
Ny Duit Dua App dia manolotra fetra famerenam-bola. Manolotra ny fe-potoana farany famerenam-bola 120 andro na efa-bolana. Tsy maintsy mandoa ny trosa iray ianao ao anatin'ny efa-bolana. Manome ihany koa ny fe-potoana farany ambany famerenam-bola, izay 90 andro na 3 volana.
Azonao atao ny mangataka indram-bola amin'ny alàlan'ny fampindramam-bola Duit Dua Apk, saingy tsy afaka mitantana orinasa mampiasa an'io vola io ianao. Azonao atao ny manatanteraka tanteraka ny zavatra ilainao isan'andro amin'ny sakafo sy ny hafa. Manolotra taha zanabola 12% isam-bolana, izay tsy maintsy aloanao.
Tokony hangataka fampindramam-bola amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao raha afaka mandoa ny zanabola sy ny vola. Misy dingana tsotra hahazoana findramam-bola amin'ny alalan'izany Mahazo App. Raha te hangataka fampindramam-bola amin'ny fampiasana an'ity app ity dia mila manome fampahalalana fototra momba ny tenanao ianao.
Ny zavatra voalohany dia tokony ho 18 taona farafaharatsiny ianao, raha ambany ianao dia tsy afaka. Ny faharoa dia E-KIP, karatra famantarana ny olom-pirenena indoneziana iray. Ny zavatra dia ny antsipirian'ny kaonty banky hafa sy ny NPWP raha manana ianao, fa ny fepetra voalohany sy faharoa dia tsy maintsy.
Misy endri-javatra hafa maro, izay azonao jerena ao amin'ity fampiharana ity. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Ampidino ny Duit Dua Apk ary manomboka mampiasa izany.
anarana Duit Dua
Anaran'ny fonosana indo.duit.dua
Araka ny nolazainay tamin'ny fampahalalana vitsivitsy momba ity rindrambaiko ity ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay hitanao. Noho izany, ao amin'ny lisitra etsy ambany, hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity izahay rehetra. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay.
Vola fampindramambola voafetra
Ny interface dia namana
Noho ny antony sasany dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store izy io. Noho izany, hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity fampiharana ity izahay rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Duit Dua no fampiharana Android tsara indrindra, izay manolotra endri-javatra tsara indrindra ho an'ny olona. Noho izany, mahazo tombony amin'ireo serivisy ireo. Ampidino fotsiny ity fampiharana ity dia mahazo vola amin'ny zanabola ambany. Ho an'ny fampiharana mahafinaritra kokoa dia tsidiho ny anay Website.
Sokajy Apps, Finance Tags Duit Dua, Duit Dua Apk, Duit Dua App, Mahazo App Post Fikarohana
Ampidino ny Free Fire Cobra Apk ho an'ny Android [vaovao 2022]